» दोलखाको भीमेश्वरको शिलामा पसिना आए,मुलुकमा अशुभ हुने मान्यता रहेकोछ!,हेर्नुहोस खास कुरा के रहेछ? दोलखाको भीमेश्वरको शिलामा पसिना आए,मुलुकमा अशुभ हुने मान्यता रहेकोछ!,हेर्नुहोस खास कुरा के रहेछ? – हाम्रो खबर
काठमाडौं । दोलखाको भीमेश्वरको शिलामा पसिना आएको छ । सो मन्दीरमा पसिना आए मुलुकमा अशुभ हुने तथा नराम्रा घटनाहरु हुने धार्मिक मान्यताहरु रहेका छन् । यसअघि पनि शिलामा पसिना आउदा देशमा ठूला-ठूला क्षति भएका थिए ।
यसअघि शिलामा १७ औं पटक फागुन ८ मा आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । त्यसपछि लगत्तै कोरोना महामारीका कारण देशभरी लकडाउन भएको थियो । २०६२०६३ को जनआन्दोलन अघि पनि शिलामा पसिना आउको थियो ।